အတတ်ပညာ China ALIGNER 63 -315mm Holding Pipes Still HDPE ဂဟေဆော်စက် ပလပ်စတစ်ပိုက်တူးလ်များ Aligner ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |CHUANGRONG
PPR /PEX/ ပိုက်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျ
Socket Fusion စက်
Butt Fusion စက်
Plastic Extrusion Welding Gun ၊
Stainless Steel ထည့်သွင်းမှုများ
ALIGNER 63 -315mm ပိုက်များကို ကိုင်ဆောင်ထားဆဲ HDPE ဂဟေဆော်စက် ပလပ်စတစ်ပိုက်တူးလ်များ ညှိကိရိယာ
1. ချိန်ညှိခြင်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တူးလ်သည် ပိုက်များကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းနေချိန်တွင် ချိန်ညှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
2. aligner 63 ကို အထူးအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အဒက်တာမလိုအပ်သောအတ္တနားဗဟိုပြုကုပ်များအတွက် 45 ဒီဂရီနှင့် 90 ဒီဂရီတွင် ပုံသေအနေအထားများအတွက်ဗဟိုအဆစ်ပါရှိသည်။
3. Clamps များကိုသယ်ဆောင်သော ဝင်ရိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖယ်ထုတ်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီး ပေါင်းစပ်ချိန်အတွင်း tapping tees ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။
အခမဲ့အပိုပစ္စည်း၊ ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ ကော်မရှင်ပေးခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေး၊ အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု၊ ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု
စက်ရုံစျေးနှုန်း HDPE ဂဟေဆော်စက် ပလပ်စတစ်ပိုက်တူးလ်များ Aligner
Woring Range 20-63mm 63-160 မီလီမီတာ
Max Dimensions 600*160*116mm 980*430*260mm
အလေးချိန်ညှိစက် 3.4KG 9KG
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအိတ် 440*190*140mm 0.5KG 1.5KG
ချိန်ညှိခြင်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တူးလ်သည် ပိုက်များကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းချိန်တွင် ချိန်ညှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။aligner 63 ကို အထူးအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အဒက်တာများမလိုအပ်သော self-centring clamps များအတွက် 45 ဒီဂရီနှင့် 90 ဒီဂရီတွင် ပုံသေအနေအထားများအတွက် ဗဟိုအဆစ်ပါရှိသည်။ကုပ်များကိုသယ်ဆောင်သောဝင်ရိုး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ကုပ်တစ်ခုကိုယ်တိုင်ကုပ်ကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေသည် ပေါင်းစပ်မှုအတွင်း tapping tees ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိရိယာသည် ပိုက်များကိုငြိမ်ပြီး electrofusio (63-160mm) အတွင်း ချိန်ညှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။aligner160 LIGHT အား အထူးအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး 45 ဒီဂရီနှင့် 90 ဒီဂရီတွင် ပုံသေအနေအထားများအတွက် ဗဟိုအဆစ်ပါရှိသော၊ အဒက်တာမလိုအပ်သော ကိုယ်ပိုင်ဗဟိုကုပ်လေးခုနှင့် ဂဟေဆော်ရန်အတွက် ကုပ်နှစ်ခုပါသော နောက်ထပ် axle တစ်ခုတောင်းဆိုချက်အရ အင်္ကျီများ။၎င်းသည် ဂဟေဆော်ပြီးသည်နှင့် ပိုက်ကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်ယူနိုင်စေမည့် အထူးအမြန်ထုတ်ကုပ်ကုပ်များ။
ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိရိယာသည် ပိုက်များကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး electrofusio (63-200mm) အတွင်း ချိန်ညှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
aligner63-200 ကို သံမဏိဖြင့် လုံးလုံးလျားလျား ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ဗဟို ချိန်ညှိနိုင်သော အဆစ်များနှင့် နောက်ဆက်တွဲတွင် တပ်ဆင်ထားသော ပိုက်တွယ်ချိတ်များ ပါရှိပါသည်။30°၊ 60°90°၊ မျဉ်းနှင့် T ဂဟေဆက်ခြင်းကဲ့သို့သော ကြိုတင်သတ်မှတ်ထောင့်များတွင် ဂဟေဆော်ရန် adjustalbe jiont ကို မတူညီသော လုပ်ငန်းခွင်4ခုတွင် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ပုဆိန်များတွင် ပိုက်ချိတ်ထားသော ခါးပတ်များ တပ်ဆင်ထားသည့် ၎င်းတို့ပေါ်တွင် V-shaped ကုပ်များရှိသည်။အဆိုပါစနစ်သည် ကုပ်နံပါတ်သို့ ပိုက်ကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အတူ အလယ်ဗဟိုကိရိယာအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ဝင်ရိုးတစ်ခုစီတွင် ကုပ်များလျှောကျနိုင်သည့် လမ်းညွှန်2ခုရှိသည်။
Pratricical side handles များသည် လှုပ်ရှားမှုနှင့် နေရာချထားစဉ်အတွင်း လွယ်ကူစွာ ဆုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် ဂဟေဆော်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပြင်ဆင်ချိန်အတွင်း နှစ်ခုစလုံးကို သေချာစေသည်။
algner ကို ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် ရနိုင်သည်-2anxes နှင့်3anex။
ယခင်- R-SB40 ကြီးမားသော Rod Extruder လက်ကိုင် ပလပ်စတစ် Extrusion Welding Gun ကို အသုံးပြုပါ။
နောက်တစ်ခု: ပလပ်စတစ်ပိုက်အတွက် ပလတ်စတစ်လက်ဖြင့် ထုထည်ဂဟေဆော်သည့်ဂွန်၊
Pipe Aligner Tools
ပိုက် Beveling ကိရိယာ
အရွယ်အစားကြီးမားသော ပလပ်စတစ်ပိုက်ဖြတ်စက် T3 T4 တောရိုင်းမျိုးကွဲ...
HDPE ပိုက်အတွင်းပိုင်း ပြင်ပ Debeader နှင့် pip...
ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ရေကိုရပ်တန့်ရန် Squeezer 63-200 ကိရိယာများ
C1 C2AC C3Manual Cut Of Plastic Pipes Shears Pl...
T1 T3 TU140 ပလပ်စတစ်ပိုက်တူးလ်များ ပိုက်ပိုက်ဆက်ကပ်...
Room13, 15/F ,Building1, ကိုးမိုင်စတုရန်းမိုင်, No.39 jiancai လမ်း၊